Onye ọ bụla na-asụ na-ekwu okwu banyere ọtụtụ ngwa nke iTunes. Ugbu a na ma ndị na ekwentị mkpanaaka na kọmputa, iTunes ngwa nwere ọtụtụ na-eto eto n'ụwa karịsịa na ubi nke ọmụma technology.
iTtunes nye otu nke kasị mma ụzọ nke na-eke backups n'ihi na anyị na ọdịnaya dị ka ozi, music, na ngwa. Otú ọ dị, ọ na-adịghị ndabere foto ma ọ bụ ọdịnaya zụrụ iTunes ngwa ahịa. Ọzọkwa, synching na kọmputa site na a USB ngwaọrụ na-eme ka usoro-erughị mgbagwoju anya. Onye ọrụ-enyi na enyi interface nke iTunes aga a ogologo ụzọ na huu na-eji ọkụ inweta ihe kasị mma nke ọrụ a.
Na ọnọdụ na-na ekwentị mkpanaaka teknụzụ na-ngwa ngwa na-agbanwe agbanwe otú anyị si ele ihe. Otú ọ dị, a na ọnọdụ abịa na ọtụtụ ihe ịma aka. Mgbe ụfọdụ iTunes nwere ike na-ndabere data ruru ọtụtụ reasons.These agụnye:
USB ngwaọrụ bụghị n'ụzọ ziri ezi jikọọ na kọmputa na-eme ka syncing ghara-ebe.
Nrụrụ Aka na faịlụ na mkpa ka a kwadoo ruru ka obi-eme nke ndị ọzọ omume.
Eji ihe bụzi ihe mgbe ochie version nke iTunes anaghị akwado site na ekwentị gị.
Na-esonụ na-ezighị ezi usoro mgbe na-agbalị ndabere.
Ò nwetụla mgbe ị nwara ndabere gị iPhones data iji iTunes wee ozi dị ka "IPhone jụrụ arịrịọ" ma ọ bụ "ndabere okpu ''. Ebe a na-atọ kasị nkịtị ụzọ i nwere ike iji salvage onwe gị.
Wụnye ọhụrụ version nke iTunes
Hichapụ gara aga ndabere Ndenye
Onwe elu ohere na kọmputa gị na-eji a dị iche iche USB ngwaọrụ.
Wụnye ọhụrụ Version nke iTunes.
Dị iche iche iPhones eji dị iche iche nsụgharị nke iTunes. The version tinye n'ọrụ site iPhone 4 nwere ike ghara ịbụ otu ihe ahụ dị achọrọ site na iPhone 6. The iPhone sistemụ nwere kpọmkwem ọkwọ ụgbọala n'ihi na akpan akpan version nke iPhone. Emelite ma ọ bụ wụnye a ọhụrụ version dakọtara na ekwentị gị, na-enye ohere ka gị na iTunes akaụntụ na nkwado ndabere na mpaghara data na kọmputa.
Ihichapụ Previous ndabere Ndenye
iTunes wee ghara-enwe ike ịmata a ndabere na e mebiri site a obi usoro. Ọ na-apụghị nwekwara nyochaa a ndabere na echekwara na iji na-ezighị ezi na usoro. Ka ihichapụ gara aga Ndenye, na-eso nzọụkwụ n'okpuru:
Gaa na iTunes menu.
Pịa na mmasị.
Họrọ ọkwọ ụgbọala
Pịa ma hichapụ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ nke mmasị.
Onwe elu Space na kọmputa gị
Itunes utilizes kọmputa ohere na-akwado ọmụma chọrọ maka ọdịnihu ojiji. The kọmputa nwere nnukwu ichekwa ohere. Mgbe ụfọdụ a ohere na-eji maka na ịchekwa faịlụ na nchekwa nwere ọmụma. Ọ bụrụ na nke a ohere jupụtara, iTunes ga-enwe ike ndabere data na na nke a ụfọdụ ọdịnaya nwere ga-ehichapụ iji onwe ohere.
Alternatively ma ọ bụrụ na n'elu atọ ikpe ada, ị nwere ike ịlele ọnọdụ nke gị eriri USB ebe ọ bụ onye, ​​na syncs na kọmputa na ekwentị. Otú ọ dị, ndị kasị mma nhọrọ bụ site n'iji a desktọọpụ ngwa akpọ Wondershare MobileGo.
Wondershare MobileGo bụ ihe dị mfe na ngwá ọrụ Android ngwaọrụ na-enyere aka n'ụzọ dị irè mekọrịta ị PC gị na ekwentị mkpanaaka. O si otú na-enye a enweghị nkebi ngwọta maka akwado multimedia faịlụ, kọntaktị, ozi, ntọala, ụdaolu na ngwa onwe ha. Ọ bụ nnọọ bara uru ngwá ọrụ maka ọrụ ndị na-elekọta ọtụtụ ihe banyere ha mobile ọdịnaya karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ azụmahịa metụtara ma ọ bụ nzuzo.
Wondershare MobileGo enyere otu ndabere mkpa data si gam akporo ngwaọrụ kọmputa na nanị otu click. Ọ nwekwara ike-eji na-effortlessly weghachite kwadoo faịlụ na data. Ndabere gị Android ngwaọrụ site na ojiji nke Wondershare MobileGo, na-eso nzọụkwụ depụtara n'okpuru:
Na-agba ọsọ MobileGo na kọmputa gị. Jikọọ na ngwaọrụ gị site na eriri USB nyere ma ọ bụ Wi-Fi.
Ke akpan window, pịa "ndabere"
Mgbe nkwado ndabere na mpaghara windo na-egosi, uncheck ọdịnaya ị na-achọghị ka ndabere dị ka ọ na-ahọrọ ihe niile ndabara.
Họrọ a zọpụta ụzọ maka kwadoo faịlụ, wee pịa azụ ruo mezue usoro.
Wondershare MobileGo nwekwara ike-eji iweghachi gị Android ngwaọrụ site na azụ elu. Ọ nwere ike na-eji na-ndabere na weghachite a ọtụtụ nke ọdịnaya dị ka music, videos, oku na ndekọ, SMS, kalenda, na kọntaktị na ngwa data. Iweghachi gị Android ngwaọrụ site na azụ elu, na-eso mfe nzọụkwụ depụtara n'okpuru:
Na-agba ọsọ MobileGo na jikọọ na gị android ngwaọrụ.
Jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa gị n'elu a Wi-Fi ma ọ bụ eriri USB
Gaa ibu ngwá ọrụ kit ke akpan window, na oké mkpa ngalaba click "weghachi"
Mgbe weghachi windo na-egosi, họrọ ndabere faịlụ na ị chọrọ weghachiri eweghachi.
Na ala nri akuku, nne Mmetụta anya na data tupu Iweghachi ma ọ bụ i nwere ike ịhapụ nhọrọ naanị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na ẹdude data.
Na ala nri akuku, pịa "weghachi" na a ga-ọdịnaya azụ ngwaọrụ gị.
Mgbe ọrụ nweghachite, ngwaọrụ ekwesịghị mgbagwoju site na kọmputa dị ka a ga-akpaghasị usoro.
> Resource> iOS Data Recovery> otú ndozi iPhone na-apụghị na nkwado ndabere na iTunes.